डा. अर्जुनदेव भट्ट - कान्तिपुर समाचार
मूत्रथैलीमा विभिन्न किसिमका अर्बुद रोग लाग्न सक्छ । परिवर्तित कोष क्यान्सर सबैभन्दा बढी देखिने गर्छ । यो मृगौलाको पेल्भिसदेखि मूत्रनलीको दुई तिहाइ ठाउँमध्ये जहाँ पनि देखापर्न सक्छ । सबैभन्दा बढी ९० प्रतिशत मूत्रथैलीमा देखिन्छ । ८ प्रतिशत मृगौलाको पेल्भिस र २ प्रतिशत मूत्रनलीमा पनि देखिन्छ ।
पुरुषलाई लाग्नेमध्ये एक प्रतिशत क्यान्सर शुक्रग्रन्थिको हुने गर्छ । यो क्यान्सर प्रायः २५–३५ उमेर समूहमा सबैभन्दा बढी देखिने गर्छ । यो उमेर समूहका पुरुषलाई शुक्रग्रन्थिकै क्यान्सरले बढी छुने गर्छ । यसको पहिचान समयमै गर्नसके ९५ प्रतिशत बिरामी पूर्णरूपमा निको हुन सक्छन् । पुरुषले आफ्नो अन्डकोष आफै जाँचेर समस्या रहे–नरहेको थाहा पाउन सक्छन् ।
नेपालमा प्रोस्टेट क्यान्सरबाट पीडित पुरुषको संख्या बढ्दै गएको छ । दीर्घायु, स्वास्थ्यप्रति बढेको जनचेतना, विशेषज्ञ चिकित्सकको वृद्धि र ‘पीएसए रक्त परीक्षण’ र आधुनिक उपकरणको उपलब्धताले रोग समयमै निदान हुन सक्ने भएकाले बिरामी संख्या बढेको हो ।
भ्यारिकोसिल छ ? बाँझै बस्नुपर्ला है !
पुरुष जननेन्द्रीयमा देखापर्ने रोग हो–भ्यारिकोसिल । यो १५ प्रतिशतसम्म देखिन सक्छ । रोगको सुरुवात प्राय: १० वर्षको उमेर पछि हुने गर्छ । करिब २०वर्ष हुँदासम्म यो निकै विकसित भइसक्छ । यो रोगले अण्डकोषमा भारीपन, पीडा र पुरुष सम्बद्ध बाँझोपन हुनसक्छ ।
डा. अर्जुनदेव भट्टका लेखहरु :
तपाईंको पिसाब ठिक छ ?
संसारभरका पुरुषहरूमा देखा पर्ने एउटा रोग हो, प्रोस्टेट वृद्धि । अमेरिकामा सबैभन्दा बढी शल्यक्रिया मोतिया विन्दुपछि यही रोगको हुन्छ । त्यहाँ वर्षेनि ४ लाख बिरामीको प्रोस्टेट शल्यक्रिया हुने गर्छ ।
महिलामा पिसाब चुहिने समस्या
विश्व तथ्यांकअनुसार प्रौढ महिलामा पिसाब चुहिने समस्या ४० प्रतिशतसम्म देखापर्छ । नेपालमा यो समस्याको व्यापकता खासै अध्ययन भएको छैन । खुलेर या समस्या भन्न नरुचाउने महिलाको बहुमत भएकोले वास्तविक आँकडा पाउन पनि सजिलो छैन । यथार्थमा पिसाब चुहिने समस्या महिलाहरूमा मात्र होइन, पुरुषमा पनि विद्यमान हुन्छ । तर महिलाको दाँजोमा त्यो निकै कम देखापर्छ ।